DAAWO: Imaaraadka oo ku lug darsaday gargaar ay Muqdisho keenayaan dhowr hay’adood (Arag magacyada hay’adaha) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DAAWO: Imaaraadka oo ku lug darsaday gargaar ay Muqdisho keenayaan dhowr hay’adood...
DAAWO: Imaaraadka oo ku lug darsaday gargaar ay Muqdisho keenayaan dhowr hay’adood (Arag magacyada hay’adaha)
(Dubai) 13 Maajo 2020 – Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Madaxwayne Xigeenka, RW iyo Xukumaha Dubai, ayaa amray in gargaar caafimaad oo ay neef-siiyeyaal ka mid yihiin loo duuliyo dalka Somalia.
Gargaarka Imaaraadka ah ayaa qayb ka ah mid kale oo ay UNHCR u direeyso Somalia, si loogula tacaalo cudurka COVID-19.
Dayuuraddan oo Muqdisho ka degi doonta ayaa sidda 35 tan oo ah agab naf badbaadis ah, taasoo ay soo ijaartey Hay’adda Caalamiga ah ee International Humanitarian City (IHC) oo ka tala qaadanaysa Sheikh Mohammed bin Rashid.
Robert Blanchard oo ka tirsan lojiistikada WHO ee Dubai ayaa sheegay inay 160 shixnadood u kala direen 100 dal oo kala duwan, iyadoo uu agabkani sidoo kale kaalmo u noqon karo dadka ay ku dheceen masiibooyinka dabiiciga ah, sida uu isna sheegay Agaasimaha Guud ee IHC, Giuseppe Saba.
Nadia Jbour, Madaxa Xafiiska UNHCR ee Imaaraadka, gaar ahaan Xafiiska GSM ee Dubai, ayaa sheegtay in waxyaabaha ay dirayaan ay ku jiraan jirikaanno, saabbuun, bustayaal, joodariyaal, alaabooyinka jikooyinka lagu isticmaalo iyo baco loogu tala galay barakacayaasha daadadka.
Sida ay UNHCR caddaysay Imaaraadku wax buu ku darsanayaa ma ahane ma aha gargaar isagu uu kaligii si iskii ah Somalia u siinayo, waloow aysan taas lafteedu aad u kala caddayn maadaama aanay hay’adaha kala duwani sheegin waxa uu Imaaraadku gaar ahaan u bixiyey.
Previous articleSomalia oo si rasmi ah u bilowday bixinta shatiyada xirmooyinka shidaalka (Sida ay maamulladu u kala heleen?)
Next article”Waa argagixiso cusub!” – Arrinta Caa’isha oo gaartey Baarlamanka Talyaaniga & dood kulul oo la is dhaafsaday (Xildhibaan loogu baaqay inuu is casilo)